Vaovao - fungicides soja: ny tokony ho fantatrao
Fungisida soja: inona no tokony ho fantatrao
Nanapa-kevitra ny hanandrana fungicides amin'ny soja aho tamin'ny taona voalohany. Ahoana no ahafantarako izay fungisida tokony hanandrana, ary rahoviana aho no tokony hampihatra azy? Ahoana no hahafantarako raha manampy izany?
Ny tontolon'ny mpanolotsaina voajanahary Indiana dia mamaly ity fanontaniana ity dia misy an'i Betsy Bower, Ceres Solutions, Lafayette; Jamie Bultemeier, agronomist, A&L Great Lakes Lab, Fort Wayne; ary Andy Like, mpamboly ary CCA, Vincennes.
Bower: Jereo ny hisafidianana vokatra fungisida misy fomba fiasa mifangaro izay hahatafiditra triazole sy strobiluron farafaharatsiny. Ny sasany koa dia ahitana ny mpiorina vaovao SDHI. Misafidiana iray izay misy hetsika tsara amin'ny toerana misy ravina frogeye.
Misy fe-potoana fizarana soja telo misy olona maro mifanakalo hevitra. Ny fotoana tsirairay dia misy ny tombony sy fatiantoka. Raha vaovao hampiasa fungisida soja aho, dia lasibatra ny dingana R3, rehefa manomboka miforona ny pod. Amin'ity dingana ity dia mahazo rakotra tsara ianao amin'ny ankamaroan'ny ravina ao amin'ny canopy.
Ny rindranasa R4 dia tara amin'ny lalao nefa mety hahomby tokoa raha sendra taonan'ny aretina ambany isika. Ho an'ny mpampiasa fungisida voalohany dia heveriko fa R2, voninkazo feno, dia aloha loatra ka tsy mampisy fungisida.
Ny fomba tokana hahafantarana raha manatsara ny vokatra ny fungisida dia ny fampidirana tsipika fanamarinana tsy misy fampiharana ao an-tsaha. Aza mampiasa laharana farany amin'ny tsipika fanamarinanao, ary aza hadino ny manao ny sakan'ny tsipika fanamarinana farafahakeliny ny haben'ny lohan-doha mitambatra na boribory mitambatra.
Rehefa misafidy fungicides dia mifantoha amin'ireo vokatra izay manome fifehezana ireo aretina nihaona taminao nandritra ny taona lasa rehefa mijery ny taninao alohan'ny sy mandritra ny famenoana voamaina. Raha tsy misy izany fampahalalana izany dia tadiavo ny vokatra spektrum malalaka izay manolotra fomba hetsika mihoatra ny iray.
Bultemeier: Ny fikarohana dia mampiseho fa ny tambiny lehibe indrindra amin'ny fampiasam-bola ho an'ny fampiharana tokana fungisida dia vokatry ny fangatahana R2 hatramin'ny faran'ny R3. Atombohy ny fiandrasana ny tanimbary soja farafaharatsiny manomboka amin'ny voninkazo. Mifantoha amin'ny aretina sy ny tsindry bibikely ary koa ny fitomboana mba hahazoana antoka fa ara-potoana tsara indrindra ny fampiharana ny fungisida. Ny R3 dia voamarika rehefa misy pod 3/16-inch amin'ny iray amin'ireo teboka efatra ambony. Raha miseho ny aretina toy ny bobongolo fotsy na teboka ravina sahona dia mety mila mitsabo alohan'ny R3 ianao. Raha misy ny fitsaboana alohan'ny R3, dia ilaina ny fampiharana faharoa aorian'ny famenoana voamaina. Raha mahita aphids soja be ianao, stinkbugs, voangory ravina tsaramaso na voangory japoney manan-danja, dia azo atao tsara ny manampy ny famonoana bibikely amin'ny fampiharana.
Aza hadino ny miala amin'ny maso tsy voatsabo mba hampitahana ny vokatra.
Tohizo ny fizahana ny saha aorian'ny fampiharana, mifantoka amin'ny fahasamihafana amin'ny tsindry amin'ny aretina eo amin'ny ampahany voatsabo sy tsy voatsabo. Mba hahafahan'ny fungicides hampitombo ny vokatra dia tsy maintsy misy ny aretina hifehezana ny fungisida. Ampitahao ny vokatra eo anelanelan'ny voatsabo sy tsy voatsabo amin'ny faritra iray eny an-tsaha.
Toy ny: Matetika, ny fampiharana fungisida manodidina ny dingana fitomboan'ny R3 dia manome valiny vokatra tsara indrindra. Ny fahalalana ny famonoana fungicide tsara indrindra alohan'ny hanombohan'ny aretina dia mety ho sarotra. Raha ny zavatra niainako dia nandeha tsara ny fungicides misy fomba fiasa roa sy ny naoty ambony amin'ny ravina frogeye. Satria taona voalohany amin'ny fungicides soya ianao, dia hamela tsipika fanamarinana vitsivitsy na sahan-tsinjara hamaritana ny fahombiazan'ny vokatra.
Fotoana fandefasana: Jun-15-2021